www.sapanasansar.com: सपनासंसार नया सर्भरमा !
सपनासंसारप्रेमी साथी हरु
आज भोलि, केहि ब्यस्तताका कारणले नियमित रुपमा ब्लग लेख्न असमर्थ भएको छु । सपनासंसार डट कम प्रति तपाई हरुले दर्साउनु भएको माया अमुल्य छ । यो माया अनि सदभाव सदा सर्वदा सपनासंसार माथि रहिरहोस् , यहि कामना गर्छु । यो साईट लाई अझ जीवित बनाउन केहि परिबर्तन गरेको छु, तपाईहरुले पनि अनुभव गर्नु भयो होला । पुरानो साईट बाट सम्पुर्ण प्रस्तुती हरु नया साईट मा ल्याउन लाग्दा त मलाई काठमाण्डौं मा डेरा सरेको याद आयो । भनिन्छ नि, काठमाण्डौं मा स्वास्नी ल्याउन(अथवा लोग्ने ल्याउन) भन्दा डेरा सर्न गार्हो रे ! मलाई त डेरा सर्न भन्दा ब्लग सर्न गार्हो जस्तो लाग्यो । आखिर ब्लग पनि त तपाई हाम्रै भावनाहरु बस्ने डेरानै त हो नि । खैर , यो कुरा लाई यहि छोडौं , तपाईको देब्रे पट्टि भएको भोटिंङ को लागि केहि विकल्प हरु छन, आँफुले चाहेको बिकल्पमा भोट हाल्नुहोला । साथसाथै धेरै मित्र हरु सपानसंसारमा पाठक दर्ता गरेर नियमित सपनासंसार पाठक बन्नुभएको छ । तपाई हरु पनि नियमित पाठक बन्नको लागि देव्रे साईट मा रहेको बाकसमा आफ्नो ईमेल ठेगाना हालेर दर्ता गर्न सक्नुहुन्छ । पछि आँफुलाई मन लागेको बेलामा स्वयँ पाठक सुचिबाट हट्न पनि सक्नुहुन्छ , जुन म कहिल्यै पनि चाहन्न। सपनासंसारका पाठक हरु नै मेरो आय आर्जन हुन् , समग्र मा मेरो मार्गदर्सक पनि हुन ।
तपाई पनि सपनासंसार लाई आफ्नो श्रृजना को आगनि बनाउन सक्नुहुन्छ । कुनै पनि प्रकासन योग्य श्रृजना भएमा, info@sapanasansar.com मा सम्पर्क गर्नुहोला। केहि सुझाब भए पनि info@sapanasansar.com मा नै सम्पर्क गर्नुहोला। MSN Messenger मा जोड्न चाहनुहुन्छ भने sapanasansar@hotmail.com लाई आफ्नो MSN Contact List मा थप्नुहोला ।
कुरा जति गरेपनि कहा सकिन्छ र ? कुनै दिन मौका मिलेछ भने, बसेर नै भलाकुसारी गरौंला नि, हुन्न र !
सपनासंसार डट कम सदा सर्वदा तपाईको बाटो हेर्दै पर्खिरहेने छ , केवल तपाई हरुको प्रतिक्षामा रहिरहने छ ।
तपाईको यो समय शुभ रहोस,
पुनश्च: जादा जादै तपाई सपनासंसारको पुरानो साईट, http://sapanasansar.blogsome.com मा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ ।
Posted by सपनासंसार at Saturday, January 10, 2009
Related Posts : मेरै बारेमा , सुचना
Labels: मेरै बारेमा , सुचना